people Nepal » विश्वकप फुटबल : अाज दोस्रो सेमिफाईनलमा इङ्ल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै , को पुग्ला फाईनलमा ? विश्वकप फुटबल : अाज दोस्रो सेमिफाईनलमा इङ्ल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै , को पुग्ला फाईनलमा ? – people Nepal
विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाईनलमा इङ्ल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै छन् । रुसको लुजनिकी स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने १२ बजे सुरु हुनेछ । विजेता टोलीले उपाधिलागि फ्रान्ससंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।